Mmetụta Digg: Ezigbo Ọdịnaya + Ntanetị mmekọrịta = BIG HITS | Martech Zone
Mgbe m mere gafee a n'ezie na-akpa ọchị video nke Bill Gates na Napoleon Dynamite Izu a, ekpebiri m ime obere ule. Amaghị na ọ bụ obere ihe nkiri, etinye m ya na blọọgụ m ma tinye ntinye blog ya Digg. Dabere na weebụsaịtị ha:
Digg bu onye webusaiti webusaiti nke ndi mmadu. Ok, kedụ ihe heck nke ahụ pụtara? Ọfọn, ihe niile dị na digg bụ nke ndị ọrụ digg na-enyefe (nke ahụ ga-abụ gị). Mgbe ị nyefere ọdịnaya, ndị ọrụ digg ndị ọzọ gụrụ ntinye gị wee digg ihe masịrị ha. Ọ bụrụ na akụkọ gị na-ama jijiji ma nweta akara ngosi zuru oke, a na-akwalite ya n'ihu peeji maka ọtụtụ nde ndị ọbịa na-ahụ maka digg.
Ọ dị mma ma ọ na-eri ahụ. Ezigbo ọdịnaya dị elu… ndị ọzọ na-adapụ. Nakwa, enwere mmekọrịta mmadụ na ibe gị ebe ị nwere ike ịhụ ihe ndị enyi gị na-egwu ma ha nwere ike ịhụ ihe ị gwuru. Dị mfe ma dị mma. Netscape na-arụ ọrụ na aka nke ya (na nso nso a hacked site na diggers). Emepekwara saịtị ọzọ 'mmekọrịta mmekọrịta' n'izu a, Diigo. Ọ dị ntakịrị, ma na-enye gị ohere ịhapụ ndetu ihe na saịtị ndị enyi gị nwere ike ịgụ ma ọ bụrụ na ha bụ ndị Diigo.
Anyways… M gbakwunyere na digg ntinye Sunday n'abalị. Ka ọ na-erule ụtụtụ Mọnde, ebe nrụọrụ m agbachaala, gbasapụ ma nwụọ n'ihi oke dị elu nke kụrụ na obere oge. (Saịtị bụ n'ezie dịkwa mma, m injinia na-agwa m na WordPress nwere ike inwe obere emetụ n'okpuru elu olu). Lee ụfọdụ stats:
A na-adịbeghị anya ntinye si Seth Godin buru amụma na ewu ewu na-eto eto maka 'ihu na ihu' vidiyo nke onwe ya na-akụ ụgbụ. Ọ na-ekwu na ọ bụghị banyere ụlọ ọrụ dịka gbasara ndị mmadụ. Mana ndị mmadụ bụ ụlọ ọrụ, ọ bụghị ya? M tinyere vidio ịka nká nke Bill Gates na saịtị m ma olu m toro n'abali site na 1000%. Yabụ - ikekwe ọ bụ maka ndị mmadụ… ndị nọ n’azụ ụlọ ọrụ ndị ahụ.
Kedu ụzọ ọ bụla, nke a na-arụtụ aka na ike ịkparịta ụka mmekọrịta, yana ọsọ nke ịkparịta ụka mmekọrịta na net. Ikekwe anyị nwere ike ịkpọ ya mmetụta 'Digg'. O doro anya, mgbe ị na-ele nọmba ahụ anya, ịkparịta ụka n'socialntanet nke net dị ike ma ghara ileghara ya anya. Naanị m kpughere blog m karịa ndị 2,500 na 48 awa! Ndekọ ndepụta m dị elu 2000% na 48 awa. Nke ahụ na-agba ume. Ọ pụtara na ndị na-agụ lere anya karịa vidiyo goofy ahụ ma na-enwe mmasị na ọdịnaya m.
Ajụjụ bụ m nwere ike idebe ha?
Obi dị m ụtọ, echeghị m na ndị na-ere ahịa ọjọọ ga-emebi Digg. A sị ka e kwuwe, ọ bụ ‘ndị na-egwu ala’ na-ekpebi ihe na-eme ya na ihe na-adịghị eme. Dịka onye na-ere ahịa, agbanyeghị, enwere m ike itinye oge na akụrụngwa na ụfọdụ ọdịnaya na-atọ ụtọ nke 'ga-egwu' ma nweta okwu ahụ na akara m ma ọ bụ ngwaahịa m.
Tags: igwudigg mmetụta
Sep 21, 2006 na 5:11 PM
Na-akpali akpali post.
Ahụrụ m Digg na-agbanwe n'ụzọ pụrụ iche ma na -emepụta ụzọ na -emepụta (na ijikwa) akụkọ akụkọ, n'ụdị ọ bụla. Ọtụtụ mmadụ na-ele ya anya dị ka ebe ọ bụla ịgha ụfọdụ njikọ dị ọnụ ala. Ebe ndị mmadụ na-etinye aka bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke ị kọwara na post gị.
Kinddị ile ya anya dị ka mega-blog.
Sep 22, 2006 na 10: 33 AM
Daalụ maka ikwu. Ee, echere m na ị bụ eziokwu. Enwere m olileanya na Digg na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ndị na-aza ajụjụ bụ ihe dị mma… ha kwesịrị igosipụta nke ọma, agbanyeghị. Diggs nke enyi ahụ dị jụụ, mana iji ya na ịgagharị na mkpado dị iche na-eme ka ọ ghara ịbụ nke a ma ama. Enwere ọla edo edo n’ebe ahụ.
Enwere m mgbagwoju anya banyere otu esi ahọrọ otu. Echiche m banyere nke a bụ na igbochi edemede ha na-ewute ha. Ọ ga - akara m mma ịhụ ndị ọrụ inwe ike ịhazi site na mkpado karịa edemede. Mgbe ahụ, dịka ọmụmaatụ, enwere m ike ịchọ “CSS Fade” wee mepụta ndepụta nke ederede ederede banyere isiokwu ahụ.
Digg na-eche na ọ ga - eme ka mmiri daa n'elu elu ma ha amabeghị oke na akụkụ B2B nke blogosphere. Gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere ike Digg isiokwu na ịkpado ha na “CRM Software”… chee nzaghachi!
Sep 22, 2006 na 2:23 PM
Ihe ndi ozo m wuputara, site na onu ogugu di nma n’ihi Diggs m na nso nso a.